Ugcwele amathafa 'obophele abafana abancane esihlahleni wabokhela ngomlilo' | News24
Ugcwele amathafa 'obophele abafana abancane esihlahleni wabokhela ngomlilo'
George – Amaphoyisa aseThembalethu, eGeorge, acela imininingwane ngemuva kokuba owesilisa ongumnikazi we-scrap yard wasendaweni esolwa ngokuthumba abafana ababili, wababophela esihlahleni wabathela ngophalafini ngaphambi kokuthungela oyedwa wabo ngomlilo.
Esitatimendeni sangoLwesibili ekuseni, okhulumela amaphoyisa uCaptain Dumile Gwavu uthe, la bafana, oneminyaka engu-11 ubudala noneminyaka engu-13 ubudala kusolwa ukuthi bathathwa e-scrap yard ngumnikazi waso wahamba nabo waya ehlathini eliseduzane naseBallots Bay Gate ngeveni.
"Umsolwa wababophela esihlahleni wase ebabhunyela ngophalafini," kusho uGwavu.
OLUNYE UDABA: Amaphoyisa acela usizo ngengane elahlekile
"Umsolwa wokhele ngomlilo omunye wabafana esebenzisa okokushisa ugwayi wase ebashiya kanjalo. La bafana bakwazile ukuziqaqa base beya emakhaya beyobika ngokubehlele. Omunye walaba bafana uthole amanxeba okusha emlenzeni."
Ngokusho kukaGwavu, amaphoyisa athole izimpahla ebezigqokwe yilaba bafana, kanti kuphenywa icala lokuthumba.
Uthe amaphoyisa abikelwe ngesigameko abe esephuthuma endaweni yesigameko kodwa izakhamuzi zingafuni ukusebenzisana namaphoyisa.
"Umphakathi ubugodle imininingwane ngomsolwa ekubeni izisulu zona besezilikhiphile ikheli ngoba ubesebalekile endaweni," usho njalo eqhuba.
"Umphakathi utshele amaphoyisa ukuthi awabuye uma umsolwa esebuyile emsebenzini. Ngaleso sikhathi amaphoyisa abethukwa, kanti bekungakaboshwa muntu. Ngakho-ke amaphoyisa acele usizo emphakathini ngemininingwane yesigameko."
"Kufanele bazi ukuthi uma beyigodla imininingwane, ekugcineni kuzoba nzima ukushushisa isigilamkhuba ngenxa yokungabibikho kobufakazi," esho.